Ma U Furan Tahay Nidaamka Maareynta Mawduucyada Cusub?
Jimco, Juun 23, 2017 Axad, Juun 25, 2017 Douglas Karr
Dhowr sano ka hor, 100% macaamiisheennu waxay u adeegsadeen WordPress inay yihiin nidaamkooda maareynta maadooyinka. Kaliya labo sano kadib tiradaasna hoos ayey u dhacday qiyaastii seddex meelood meel. Tan iyo markii aan horumarinaayay oo aan qaabeyn jiray bogag WordPress muddo haatan laga joogo toban sano, badanaa waxaan fiiriyaa CMS-gaas sababo dhowr ah awgood. Maxaan U Isticmaalnaa WordPress Mawduuc La Yaab Leh Iyo Taageero. Goobaha sida Themeforest ayaa ah kuwa aan ugu jeclahay meesha aan ka heli karo inta ugu badan